UPDATE: Raadi hogaamiye kale Thiago Silva
Mauricio Pochettino ayaa loo magacaabay tababaraha kooxda Paris Saint-Germain isagoo qalinka ku duugay heshiis 18 bilood ah, iyadoo ay la wareegeen Neymar, Mbappe iyo kuwa kale.
Pochettino ayaa koox la’aan ahaa muddo 13 bilood ah tan iyo markii laga ceyriyay shaqada kooxda Tottenham, isagoo bedelay Thomas Tuchel oo ay shaqada ka ceyrisay PSG usbuucii hore.
Tababaraha reer Argentina ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay mashruuciisa cusub uuna qaban doono shaqadiisa ugu horeysa laba waji oo mid kamid ah uu ku saabsan yahay shaqada maalinlaha ah ee tababarka, diyaarinta kulamada iyo isku dubaridka ciyaartoyda. Midda labaad ayaa ah inuu la macaamili doono daaqadda kala guurka bisha Janaayo si uu u raadiyo tiro calaamadaha iibsiga ah ee ugu sarreeya.
Kooxda reer France ayaa umuuqata inay kusocoto hoos udhac xagaagan ah, xawaare iyo xawaare la’aan, waxayna horey uqaabileen kulamo kabadan kuwii ay sameeyeen sanadkii 2019/20 waxayna kujiraan booska 3-aad iyagoo leh hal dhibic. hoosta Lyon iyo Lille oo hogaaminaya wadada.
PSG ayaa sidoo kale lagu qasbay inay si adag u shaqeyso wareega ugu dambeeya ee wareega group-yada Champions League ka dib markii laga badiyay labo ka mid ah seddexdii kulan ee ugu horeysay.
Warbixintan, waxaan ku eegaynaa arrimaha ay tahay inuu Mauricio Pochettino xusuusto bilowgii si uu ugu guuleysto PSG.
1. Hogaamiye la’aan
Bixitaankii Thiago Silva, wuxuu kaga tagay PSG farqi weyn oo aysan wali helin bedelkiisa, qaab ciyaareedkiisana waxaa uga sii daray xaqiiqda ah inaysan jirin cid haatan la heli karo.
Kabtankii hore ee kooxda PSG ayaa xagaagii ugu biiray kooxda chelsea heshiis laba sano oo xor ah waxana uu soo afjaray 8 sano oo uu joogay garoonka Parc des Princes halkaas oo ay kooxda reer France raadinaysay badalkiisa.
Silva waa 36 jir laakiin doorkiisa qolka labiska ee kooxda PSG ayaa ka badnaa qofkasta.
Marquinhos ayaa xirtay jijintii kabtanka waana daafac wanaagsan, laakiin maadaama uu Thiago Silva kooxda ku maamulo garoonka dhexdiisa iyo qolka labiska, ma gaaro.
Wareegii hore ee Champions League, goolasha laga dhaliyay PSG waxay ahaayeen afar ka badan goolashii laga dhaliyay xilli ciyaareedkii hore.
Tababare Mauricio Pochettino ayaa sugaya inuu helo hogaamiye dabiici ah oo kasban kara kalsoonida qolka labiska, ciyaartoy walbana xushmad ayuu u hayaa, waana shaqadiisa ugu horeysa.
2. Dhibaatada dhamaadka-dhamaadka
PSG waa mid ka mid ah kooxaha ugu weerarka fiican adduunka laakiin waxay dhibaato ka haysataa maqnaanshaha weeraryahan dabiici ah (Lambarka 9). Waxay isku raaceen inay u ogolaadaan Edinson Cavani inuu si bilaash ah ugu biiro Manchester United.
Cavani inuu baxo, waxaa khaladkiisa lahaa Tuchel, weeraryahanka reer Uruguay, hogaamiyaha gooldhalinta ee kooxda PSG abid iyo weeraryahan saafi ah oo No.9 ah tobankii sano ee lasoo dhaafay.
Inta badan, Neymar iyo Klian Mbappe waxay ku tiirsan yihiin weerarka, laakiin midkoodna ma ahan weeraryahan dabiici ah waana inay helaan ciyaartoy sifiican uga ciyaari kara booskaas, Mauro Icardi, oo loo wareejiyay Inter Milan. ka ciyaaray booskaas laakiin waxaa lagu dilay dhaawacyo.
Pochettino waa inuu saxeexaa dookha labaad ee Icardi.
Ku kasbo kalsooni qolka labiska
Faa’iido-darrooyinka uu qabo kii ka horreeyay, Thomas Tuchel, waxaa ka mid ahaa inuu isku dhacay agaasimaha isboortiga Leonardo, laakiin wuxuu kalsooni ka haystay ciyaartooyda waaweyn ee qolka labiska.
Tababarayaasha caanka ah, dhanka kale, inta badan waxay la kulmaan ciyaartoy timo weyn leh mana u ogolaadaan tababarayaasha inay raacaan awaamiirtooda.
Pochettino waxaa horyaalla shaqo adag waana inuu kasbadaa kalsoonida ciyaartoy waaweyn sida Neymar oo kale oo jecel in lagu beddelo macallimiin xitaa haddii uu daciif yahay ama keydka la dhigo xitaa haddii uu ganaax ku maqan yahay.
Kylian Mbappe ayaa inta badan ka caqli badan tababarayaashiisa, sababtoo ah waa ciyaaryahan macquul ah oo lagu tilmaamo inuu yahay qof caqli badan. Markii Tuchel laga ceyriyey naadiga, wuxuu ku soo qoray bartiisa Instagram-ka si uu u muujiyo sida uusan ugu qanacsaneyn tallaabada kooxda.
Mbappe ayaa sidoo kale cadeeyay in sharciyada kubada cagta ay yihiin “murugo” iyo “qof wax weyn qabtay” in kooxda laga ceyriyo, wuxuuna ugu dambeyn u mahadceliyay tababaraha Jarmalka.
Janaayo waa muhiim
Dad badan ayaa filayay in PSG ay maalgashi badan ku sameyso kooxda xagaagii lasoo dhaafay madaama ay u dhawaayeen finalka Champions League, laakiin heshiiska amaahda ee Icardi ayaa ahaa waxa kaliya ee ay kooxda sameysay.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo kala duwan, Tuchel iyo Leonardo waxay isku khilaafeen in ciyaartoy cusub lagu soo daro kooxda, taas oo Leonardo uu diiday sababo la xiriira dhaqaale xumo ka dhalatay virus-ka Corona.
Mauricio Pochettino, oo dhaxli doona qadka dhexe ee cajiibka ah isla markaana uu ku jiro farshaxanka Marco Verratti, wuxuu u baahan doonaa inuu arko bisha Janaayo haddii uu helo laacib u qori kara dusha sare ee miiska.
Neymar iyo Mbappe kuma jiraan heerkoodii ugu sarreeyay waxayna u baahan yihiin inay raadsadaan weeraryahan kale oo gacan ku dhiigle ah si ay culeyska u sii daayaan.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka Premier League Ee Kooxaha West Brom v Arsenal